Page Admin | Job in Myanmar ﻿
19.9.2019, Full time , Service
Company: Myanmar Hand in Hand Marketing Services Co.,Ltd.
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အထက်မှ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် ။
•	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိင်သူဖြစ်ရမည် ။
•	Facebook Page များ အတွက် content များ ရေးသားနိုင်ရမည် ။
•	Design အခြေခံ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။
Work location အမှတ် ၂၁၀ (၅ လွာ)၊ မြတ်ဆုမွန် ကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားမှတ်တိုင်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	အထက်မှပေးအပ်သောတာဝန်များကိုကျေပွန်အောင်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
•	နိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည် ။ •	မိမိတာဝန်ယူထားသော Company နှင့် ပတ်သတ်သော REPORT များအား ဖြေရှင်းနိုင်ရမည် ။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အထက်မှ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် ။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိင်သူဖြစ်ရမည် ။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
Page Admin Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myanmar Hand in Hand Marketing Services Co.,Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon